Ubugcisa babathengi bawe eluthandweni | Martech Zone
Ubugcisa babathengi bawe eluthandweni
Izolo, endleleni eya emsebenzini, bendimamele UDave Ramsey Thetha noJoe Beam, umbhali we Ubugcisa bokuwa eluthandweni. UJoe uthe zintathu izinto eziphambili ekuthandeni… ukuzibophelela, ukusondelelana kunye nothando. Incoko inamathele kum-kangangokuba ndenze imemo yelizwi malunga noko ndikuvileyo ukubhala iposti kamva.
Ndandixoxa ngayo noTroy Burk, umseki kunye nomququzeleli we-Right On Interactive. UTroy unomdla malunga ukuzenzekela ngokuzenzekelayo kodwa akavumelani nabaninzi kolu shishino abafihla iinkqubo zabo zokuvelisa njengezentengiso. Ukholelwa ekubeni ukukhulisa kunye nonxibelelwano ekufuneka lwenzekile lukwiiklayenti zakho zangoku ngakumbi kunezikhokelo ezingakhange zizibophelele kuhlobo lwakho. Wowu.
Ukuzibophelela, ukusondelelana kunye nokuthanda
ukuzibophelela -Abathengi benza utyalo-mali kwinkampani yakho kwiimveliso kunye neenkonzo zakho. Ihlala indimangalisa ukuba zingaphi iinkampani ezizinikele ngakumbi kwimali eziswa ngabathengi bazo kunabathengi ngokwabo. Ukuba uhambisa ngokwesivumelwano kodwa umthengi wakho akaphumelelanga, nobabini niyalahleka. Kuya kufuneka uzibophelele kwimpumelelo yabathengi bethu, nokuba zithini iimali eziyimfuneko. Abathengi bakho kufuneka bazibophelele kwimpumelelo yakho, baqinisekise ukuba iimali nazo azingeni endleleni. Sisikelelwe ngabathengi abazimisele kuthi nakwelinye icala.
Ulwalamano -Ungaphazami ukusondelelana nothando lomntu. Ukusondelana kukwathatha ixesha lokuqonda abathengi bakho nokuba bakuqonde. Sabelana ngobuthathaka bethu nabathengi bethu, sifunde ukuba buthini ubuthathaka babo, kwaye siqinisekise ukuba siceba ukuqinisekisa ukuba sobabini sikugubungele. Sifunda kwakhona kangangoko sinakho malunga nabathengi bethu kwaye sabelane nabo ngaphaya kweekhontrakthi zethu. Sibazisa kunxibelelwano lwethu, siyabafumana abanye oovimba, sibacebisa nge-intanethi nangaphandle. Asizisayini izivumelwano neenkampani ngaphandle kokuba sisebenzisa iimveliso zabo apho kunokwenzeka. Sizama ukubazi kakuhle kangangokuba sinokuzithengisa ngokufanelekileyo iimveliso zabo.
uwuthanda -Enye yeenkampani esithethileyo nokucima nazo iyasokola. Njengoko sizama ukubona ukuba singabanceda njani (ayingomthengi), awunakufumana ifayile ye- Ongatshatanga umntu kubasebenzi babo onomdla into abayenzayo. Bebeqesha abanye abantu abaziwayo apha naphaya ukuba bazimanye nabo kwiiwebhubhsayithi nakwiminyhadala… kodwa abo bantu abazisebenzisi le imveliso. Bangayithanda njani xa bengazibopheleli ekusebenziseni imveliso? Eyona nto iphambili kukuba abanako. Yiyo le nto besokola.
Ngaba uzibophelele kubaxhasi bakho? Ngaba usondelelene nabo, ishishini labo, isikhundla sabo, kunye nemiceli mngeni yabo? Ngaba uyayithanda imveliso yabo okanye iinkonzo? Ukuba uphendula ngohayi kuyo nayiphi na le mibuzo, sukulindela ukuba uya kuthandana. Siyabathanda abaxhasi bethu kwaye siyazingca ngokutsho ukuba abathengi bethu bayasithanda. Akuzange kube njalo, kodwa ubudlelwane bethu nabo buqhubeka buqhakaza.
Into yokugqibela… kuba senza into esiyithandayo, ayisebenzi kwaphela. Yindawo emangalisayo ukuba ube kuyo!
tags: uthando lwabathengiukuzibophelelauthando lwabathengiulwalamanouwuthanda
IDAM: Yintoni uLawulo lweeAsethi zeDijithali?